भाग्य पनि कस्तो ! एउटै व्यक्ति’लाई मलेरिया, डेंगु र कोरोना संक्रमण ! उनैलाई कोब्रा-सर्पले पनि डस्यो.. – Ap Nepal
भाग्य पनि कस्तो ! एउटै व्यक्ति’लाई मलेरिया, डेंगु र कोरोना संक्रमण ! उनैलाई कोब्रा-सर्पले पनि डस्यो..
मानिस अभा’गी हुने पनि हद हुन्छ । तर, एक जना व्यक्ति लाई उनको खराब भाग्यले अझै पिछा छोडेको छैन । उनले लगातार पीडामाथि पीडा खेपी रहेका छन् । च्यारि’टीको काम गर्ने यी बेलायती नाग-रिकले कोरोना-भाइरस, डेंगु र मले-रियालाई जिते ।
तर, उनलाई फेरि सर्पले टो:क्यो । अहिले उनी सम्भा’वित घा’तक सर्पको डसाइको उप-चार गराएर स्वास्थ्य लाभ गरि रहेका छन् । उनी अहिले भार’तको राज;स्थानमा छन् ।
इयान जोन्स नामका ती व्यक्तिलाई भारतीय गोब्राले राज’स्थानको जोध’पुरमा हुँदा टोकेको र उनी जोध:पुरमै एक अस्पतालमा उप’चारका लागि भर्ना भएको समाचार एजेन्सी एए.फपीले जनाएको छ । ‘गाउँमा सर्पले टोकेपछि जोन्स हामी’कहाँ गत हप्ता आएका हुन् ।
सुरुमा हामी’ले उन लाई कोभिड–१९ पनि भएको (दोस्रो पटक) आशंका गरेका थियौं तर को’भिडको नतिजा भने नेगेटिभ आयो’ जोन्सको उपचार गरेका स्था’नीय मेडिपल्स अस्प’तालका डा. अभिषेक तातरले एएफपीसँग भने ।
‘हामी;कहाँ आइ पुग्दा उनी होसमै थिए र उनीमा सर्पले टो’केको लक्षण देखि’एको थियो । उनको दृष्टि धमिलो भएको थियो र हिँड्न कठिन भएको थियो । तर, यी सा’मान्यतया अस्थायी लक्षण हुन्’ डा. तातरले थपे । जोन्स लाई अस्पतालबाट भने डिस्चार्ज गरिएको छ ।
‘हामीलाई अब कुनै लामो समयसम्म रहने असर हुँदैन भन्ने भए+पछि डिस्चार्ज गरेका हौं । उनी ठिक भइसकेका छैनन् भने पनि अबका केही दिनमा पूर्ण ठिक हुन्छन्’ डा तातरले भने ।
‘ड्याड एक फाइ-टर हुनुहुन्छ । भारत गए-पछि उहाँ पहिले मलेरिया र डेंगुबाट ग्रस्त हुनुभयो त्यस’पछि उहाँ-लाई कोभिड १९ पनि भयो’ उनका छोरा सेब जोन्सले गो फण्ड मीमा एक वक्तव्यमा भनेका छन् ।
उनका-छोरा सेबले उनको उप’चारको बिल तिर्न र उनलाई पुनः इङल्याण्ड फर्का’उनको लागि पैसाको अभाव भए’पछि पैसा जुटाउन यो पेज सुरु गरेका हुन् ।
जोन्स लकडाउन-भन्दा ठिक अघि भारत आएका थिए । लगत्तै लक’डाउन भयो । लक’डाउन पछिको अव’धिमा जोन्सले मलेरिया, डेंगु, कोरोनाभाइरस र सर्पको डसाइ सहि सकेका छन् ।डिसीनेपाल
Prevटिकटकमा भाइरल बन्दै रमेश र कल्पनाको जोडी- रमेशले कल्पना बारे यस्तो भन्छन् (हेरौ टिकटक हिट भिडियो सहित)
Nextभैँसीको पनि अन्तरवार्ता चर्चित पत्रकार, जसले लिए पछी भिडियो बन्यो भाइ’ रल (हे,र्नुहोस् भिडियो)
यस्तो काम गरेर अ, र्बपति बनेका ९ वर्षका यी बालक, यो वर्ष मात्र ३ अर्ब बढी कमाए
रमेश प्रसाइ र कल्पना दाहाललाई वि,बाहको बारेमा सोधिएको प्र’श्नमा कल्पनाले दिइन् यस्तो उत्तर (भि,डियो सहित)
आज नेपाल पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ बिदेशी मुद्राको विनिमय दर..
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (119754)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (72836)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (46592)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (41592)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (38824)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (37412)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (37038)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (36766)
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (35181)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (33238)
किसानले मल नपाएको भन्दै कृषि मन्त्री यादवले दिए यस्तो आश्वासन..
”इ, ज्जत बचाउन कट्टु फुकालेर मुख छो’ प्नुजस्तो देखियो” : अभिनेत्री करिश्मा
नगर प्रहरीले ठेलामा मोकै बेचेर गुजरा गर्ने महिलाको ठेला नि’ यन्त्रणमा लिए पछी मेयरको चौ तर्फी बि, रोध
आफ्नै स्कुल बसले ठ, क्करबाट २ जनाको मृ, त्यु
काठमाण्डौ बल्ल देखिनेभयो राजधानि जस्तो ,कुलमान घिसिङले सुरू गर्दै यस्तो काम